मेरी आमाले रुँदै भन्नुभयाे,`मैले बुहारीको औँठी चो-रेको छैन छोरा´ २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला – Annapurna Daily
On Jun 13, 2021 130
एकदिन बेलुकापख मेरो श्रीमतिले औंठी चो-रेको आ-रोप पटक -पटक मेराे आमालाई लगाउँदै थिईन र म उनलाई चुपलाग भनेर सम्झाईरहेको थिंए तर मेरो श्रीमती चुप रहनै मानिनन र उनले झन च-र्को स्वरमा स-रा-प्न थालिन । मेरो बाबाले दिनुभएको त्यो औंठी, यहीनेर राखेकी थिंए ,तपाई र म भन्दा अरु कोही यो कोठामा आएको पनि त छैन । यो औंठी तपाईंको आमाले नै चो-रे-को हुनुपर्छ । जब म यो कुराले सहन सकिन तब मैले उनलाई एक झा-प-ड ल-गाइ-दिए ।
अहिले भर्खर तिन महिना त भयो नि तिमीसंग बिबाह गरेको , तिमिले के चिनेकी छौ मेरो आमालाई ? मेरो हातको झा-प-ड दह्रो थियो र उनले सहन सकिन र घर छाडेर माइत जान लागिन ” जाने क्रममा उनले मतिर हेरेर भनिन्; सन्तोष , तपाइँलाई आमाको यतिधेरै बिश्वास किन लाग्छ ? मैले भने- जब म सानो थिंए ,सानैमा बुबा बि-ते-काले मेरी आमाले छिमेकीको घरमा गएर झाडु पोछा अनि भॉडा मा-झेर केही पैसा कमाउनु हुन्थ्यो त्यसले एकछाक रोटी पाक्ने गर्थ्यो । आमा एकथालीमा मलाई रोटी निकालेर दिनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो ,मेरो खाना यो डिव्वामा छ , म पछी खान्छु तिमी खाऊ । म पनि सधैं आधि रोटी खाएर भन्ने गर्थें कि आमा मेरो पेट टन्न भयो अब खान सक्दिन ।
म खेल्न गए है , यही भनेर दिनहुँ निस्कन्थें र भान्सा पछाडीको झ्यालबाट हेर्थे, आमाले राखेको डिव्वामा केही हुँदैनथ्यो मैले छोडेको जु-ठो रोटी खानुहुन्थ्यो र मलाई यसरीनै पालेर हुर्काउनु भयो । आज म दुई रोटी कमाउने भएको छु तर यस्तो कसरी भु-ल हुन्छ मेरो आमावाट तिम्रो औंठी चो-र्नु पर्ने, अझै आमाले त्यो कलिलो उमेरमा पनि आफ्नो ईच्छालाई मा-रि-न भने, त्यो आमालाई तिमी औंठी चो-री-को आ-रो-प? कसरी चो-र्न सक्नुहुन्छ र यो म सोंच्न पनि सक्दिन “तिमी तिन महिनादेखी मसंग छौ ,मैले त आमाको तपस्यालाई बिगत २५ बर्षदेखी नजिकबाट देखी राखेको छु ।
मेरो यि कुरा आमाले पनि सुन्नुभएको रहेछ । मेरो यो कुरा सुनेर ढोका पछाडि उभिएर आमाले रो-ए-को आवाज सुने र म त्यतै गए आमाले मलाई रुँ-दै न्यानो अंकमाल गर्नुभयो । त्यो औंठी ह-रा-एको दिन मेरो आमालाई चो-री-को दो-ष लगाउँदा नराम्रो लागिरहेको थियो ।
बाबू सन्तोष, म चो-र होईन मलाई चो-रिको आ-रो-प नलगाऊ, त्यो दिन मेरो आमाले हात जोड्दै म संग यस्तै भन्नुभएको थियो । मैले आज सम्म ठुलो मान्छे रो-ए-को कहिल्यै देखेको थिईन,ति मेरो आमा रुँ-दा मेरो मन थामेन म अंकमाल गर्दै रु-न थालें। मेरो श्रीमती ठुला-ठुला ऑ-खा प-ल्टा-एर छ-ड्के नजरले हेर्दै थिइन ।
हो आमा हजुर चो-र होईन मैले आमाको पटुकीमा समातेर यही भनिरहे । आज मलाई बालापनको धेरै याद आएको थियो, मेरो बुवा सानैमा बि-ते-काले मेरो आमाले मलाई मेरी खुशीको लागी पहिलो चोटी घोडा बन्दै आफ्नो पिठ्युँमा राखेर हसाउनु भएको थियो ।
आमाको पिठ्युमा चढ्दा खेरी आकाशै छोएझै लाग्थ्यो,म धेरै पटक मेरो आमालाई घोडा बन्न भनेर क-रा-उँथे मेरो आमा हँस्दै त्यो दिनभरीको अरुको भाँडा माझेर थाकेको शरिरमा पनि नाई कहिल्यै नभन्ने मेरो आमा आज मौन हुनुहुन्थ्यो । म निकैबेर मेरो आमालाई हेरीरहें ,त्यति हसिली मेरो आमा किन मौन हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँले मलाई पनि दो-षी सम्झनुहुन्थ्यो होला ।
एकाएक समाजका ना-ई-केह-रु र अरुकेही हुलहरु मेरो घर आए । कतिले मेरो आमालाई यसको त नियतमा पहिल्यै शं-का लागेको कुरा बताए । कतिले यो टो-को-ई हो यसले पोई पनि टो-की ! “मेरोआमा रो-इ-रहनुभयो मेरो श्रीमती मेरो घरमा दुलही बनी भित्रीएको ३ महिना पनि भएको थिएन उनले समाजकै पक्ष लिएर बोल्दै थिइन् ।
मैले समाजलाई ठा-डो चु-नौ-ति- दिदै भने, यो हाम्रो घरको निजि मा-म-ला हो , तिमीहरुको बोल्ने कुनै ह-क छैन ,जाओ कसैको हेल्प चाहिंदैन ,मैले यतिभनेपछी सबै फर्किए। मैले रि-स-को झों-क-मा श्रीमतीलाई दुई च-ड्-क-न लगाए तैले गर्दानै यो सबै भयो ,श-त्रु-हरु सबै हाँसे ।
समय सधैं एकनाशले चल्दैन मेरी श्रीमती ग-र्भव-ती भएकी थिईन,भोलिपल्ट च-क्क-र लागेर आँगनको छेउमा ढ-लि-न, त्यतिखेर म घरमा थिईन बिशेष कामको लागी घरबाहिर थिए ।
गाउमा एम्वुलेन्स थिएन मेरो बुढी आमाले डोकोमा बो-के-र स्वास्थचौकी -सम्म पुर्याउनु भयो र उनको जिवनको र-क्षा गर्नुभयो त्यो दिन मेरो आमातिर उनले हेरेर उनले भनिन; आमा स-री मैले हजुरलाई चिनिन मैले ठुलो आ-रो-प लगाए । आज मेरो आमा हाँस्नु भएको थियो ।